Nhau - Qingdao Silinde Industrial Equipment Co., Ltd.
Qingdao Silinde Maindasitiri Ekushandisa Co., Ltd.
Qingdao Silinde Industrial Equipment Co, Ltd. yakatsaurirwa kutsvagisa, kusimudzira, kugadzira uye kutengesa kweYSC brand indasitiri yekushandisa pachayo pamusoro pemakore. Nekuramba uchirwira nekambani yedu kwemakore, zvigadzirwa zveYSC zvakatengeswa kune vese pasirese. Iine hunhu hwayo hwakatanhamara, masevhisi akapedzwa uye mutengo wemakwikwi zvakanyanya, yave imwe yemhando dzinovimbika kwazvo mumaindasitiri ekudzora indasitiri muChina. Kuburikidza neyekureba-tekinoroji kubatana pamwe neEuropean, maJapan uye maSouth Korea makambani, zvave zvichivandudza chigadzirwa chayo system uye yakawedzerwa kune kuzvidzora-vharuvhu nemidziyo yakakosha kubva kune pneumatic hydraulic zvigadzirwa. Kambani yedu yakagadzika seti yehungwaru mhando manejimendi sisitimu yekuona kuti chigadzirwa chemhando yeYSC brand inosvika padanho repamusoro pakati pevezera rayo pasirese.
Kubva payakagadzwa, YSC, seyakakurumbira mhando mune pneumatic hydraulic indasitiri, yanga ichishingairira mukuita kwemaindasitiri eChina. Izvo zvave zvichitevedzera QSPT (mhando, sevhisi, mutengo, nguva) bhizinesi manejimendi musimboti uye zvishoma nezvishoma kuvandudza, kugadzirisa uye kupedzisa chimiro chayo chechigadzirwa zvichitevera zvivakwa zvekushambadzira zvemumba uye zvine chekuita nekusimudzira maitiro emaindasitiri otomatiki kuChina kuitira kupa zvinotsigira uye masevhisi kumaindasitiri mazhinji anosanganisira kuputira, kudhinda, zvemagetsi, zvishandiso zvemagetsi, mota, michina, simbi, kutenderera, kudhiraivha, dhijitari, peturu uye indasitiri yemakemikari kuChina kwese. Kwechinguva, makambani mazhinji anozivikanwa muChina akagadzira kudyidzana kwenguva refu uye kugadzikana nesu.
Sezvo danho remaindasitiri ekushandura michina muChina richiwedzera, matambudziko matsva anomutswa kumichina yekumba nemichina yekushandisa. Panguva ino, inopawo mikana mukusimudzira kwedu. Pahafu yechipiri yegore ra2006, isu takaisa uye tikamisa YSC China Kugadzira Base uye pakutanga tamisa timu yekuvandudza Mune nzanga yanhasi kana mutengo wekugadzira wagadziriswa zvishoma nezvishoma, zvigadzirwa zveYSC zvikuru zvinochengetedza kukwikwidza kwemitengo pazvikonzero zvekuti hunhu hunovimbiswa. Yenguva, nhevedzano yekusimudzira uye kugadzirwa iri kuwedzera. Zvimwe kunze kwekugutsa zvinodikanwa zvemirairo yekumba, zvimwe zvinodyiwa muSouth Korea uye Southeast Asia nyika. Mushure memakore akati wandei ekushanda nesimba, yakawana kushambadzira kubvuma imwezve nguva. Naizvozvo, YSC brand haisi yako chete sarudzo yakanaka asiwo masevhisi sevimbiso yekubudirira kwako. Mumazuva anouya, isu ticharamba tichiomerera kunheyo pakuongorora kunyangwe tichienzanisa purofiti uye tisina kushandisa zvisirizvo kuwana mabhenefiti. Tichava vakazvipira zvizere kukura michini uye kushandisa michina mu China.
Tinoda kujoinha maoko newe mukugadzira ramangwana rakavimbika rezvigadzirwa zvemabhizimusi epamba.
Post nguva: Aug-14-2020